Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguOlga
Silinyathelo elisandula ukusungulwa apho siphumeza kwaye sisebenzise izinto ezahlukeneyo eziphilayo. Sikwaseke indawo yokukhempisha, apho iindwendwe zethu nabafundi banokuhlala khona, bonwabe kwaye bafunde izenzo zethu.Indawo yethu ibekwe kwindawo eyahlukileyo yomhlaba, uluntu olusondeleyo (ilali yendawo) ikumgama we-1 km.
Kwindawo yethu uya kufumana ihlathi, iintaba kunye namatye aneembono ezintle, amangcwaba amandulo, umlambo apho unokuthi ube ne-massage yamanzi, upholile okanye ube nepikiniki. Sinikezela nangokhenketho
1. umbane, - ukutshaja iifowuni, iilaptops.
4. umlilo omkhulu
7. indlu yangasese
11.bath (ihlawulwe ngokwahlukeneyo).
Kufuphi iimonki zase-Aghavnavnavank kunye neGoshavank, iPaki yeSizwe yaseDilijan, umzila weTranscaucasian, ihlathi lase-Elven, umlambo weentaba, iintaba kunye nemvelo engeyiyo ejikeleze wena.А ночью Вас будут охранять миллиарды звёзд и невероятная луна.
Iimonki zikufuphi neAghavnavank kunye neGoshavank, ipaki yesizwe yaseDilijan, iTranscaucasian Trail, ihlathi le-Elven, umlambo weentaba, iintaba kunye nendalo engeyiyo ejikeleze wena. Kwaye ebusuku iibhiliyoni zeenkwenkwezi eziqaqambileyo kunye nenyanga yomlingo ziya kukulinda.